Nhau - LESITE | Chigadzirwa kurongedza kuchangobva kukwidziridzwa uye chiratidzo chebrand chinoramba chichiwedzera
LESITE | Chigadzirwa kurongedza kuchangobva kukwidziridzwa uye chiratidzo chebrand chinoramba chichiwedzera
Gore idzva uye hupenyu hutsva newatsva ekurongedza
Nguva inorarama kusvika kune anodzinga zviroto, uye iri rimwe gore rechirimo. Tichitarisa kumashure ku2020, tichakunda matambudziko pamwe chete, kushanda nesimba, kana kugara tichidziya sepakutanga. Mumwe nemumwe ane goho rake. Tichitarisira kumberi kwegore idzva, vanhu vari kutarisira hupenyu huri nani, uye munhu wese achagovana zvido zvavo, vagovana goho ravo, uye kuronga gore idzva uye hupenyu hutsva. Semutungamiri muindasitiri yepurasitiki repamba, Lesite anoenderera mberi nekugadzirisa nekuvandudza, kuunza nyowani, uye kuvhura prelude yekuvandudza kwakazara kwechiratidzo chayo parwendo rwayo kuenda kunzvimbo dzakakwirira. Iyo yakagadzira iyo nyowani yechiratidzo mufananidzo kubva kwakanatswa manejimendi yekambani kune zvigadzirwa kurongedza uye brand services. Kuti uwane zvinodikanwa zvakasiyana zvemusika pamatanho akasiyana, zvinopa kurudziro yakasimba uye vimbiso yekukurumidza uye kwakadzikama kusimudzira kweramangwana uye kugadzirwa kwechiratidzo chenyika dzese.
Chitsva chigadzirwa kurongedza kunogadzira zvitsva zvehurefu
Kuchinja kukosha. Iwo 2021 Lesite edenga akateedzana zvigadzirwa zvinozoratidzwa pamberi peveruzhinji nechinhu chitsva chigadzirwa chigadzirwa chekunze chipakeji. Iyi yekumisikidza yekupakira inonyanya kune chigadzirwa chekunze chipaketi bhokisi, mukati mehomwe bhokisi, iro chigadzirwa chigadzirwa, zita rezvigadzirwa, iro bhuku rezvigadzirwa uye iko kuiswa kwepakeji. Nesimudziro yakabatana, yakajeka uye inozivikanwa marogo maraki anoiswa pane ese fuselage uye yekunze bhokisi rekupakira, kuitira kuti chigadzirwa chigone kumira pakati pezvinhu zvinopenya mune imwechete indasitiri kekutanga. Ipo ichitora kukwirira kwakanyanya kwevatengi uye kuzivikanwa, Lesite Technology inotarisirawo kuzokwanisa kujekesa zvakajeka hunyanzvi hwehunhu uye hunhu kuburikidza nekukwiridzira kurongedza.
Kuvandudza kutsva kwebasa, kugadzira kukosha kutsva
Nekuda kwehunyanzvi, kusimudzira. Lesite Technology yanga ichinyatso kubatikana muindasitiri iyi kwemakore gumi nemashanu, ichisimbirira pamhando yekuvandudza uye kuwedzera kukosha kwechiratidzo. Iko kukwidziridzwa kweiyi dhizaini kudzokorora ndeimwe sublimation yeLesite brand mufananidzo. Inotungamirwa neiyo nyowani yechiratidzo dhizaini dhizaini, Lesite yapedza shanduko nyowani. Iro brand chirevo chakafuridzirwa neiyo brand optimization inozadzisa Lesite. Kubudirira kutadza munzvimbo yazvino yekushandisa. Mukutsvaga kwanhasi kwehungwaru, zvese zvigadzirwa uye kurongedza, maLesite ari kuramba achivandudza, nepo achisangana nezvinodiwa nevatengi, achifambira mberi nenguva!
1 Mushure mehomwe yekutsvagisa pasuru
Lesite brand Chirungu katoni
Lesite Brand Chinese Yekunze Bhokisi
2. Mushure mekuvandudza mukati mebhokisi
Lesite brand Chirungu yemukati kurongedza
3. Mushure mokunge fuselage LOGO yagadziriswa
Chinese uye Chirungu vhezheni yeLesite brand muviri maitiro
4. Mushure mejecha rekudzora rakwidziridzwa
Lesite brand Chinese uye Chirungu vhezheni yemuviri maitiro
5. Mushure mekuti zita replate rakwidziridzwa
Lesite ine mazita echirungu
Lesite Brushless Chirungu Nameplate
Lesite ine zita reChinese
Lesite Brushless Chinese Zita rakapetwa
6. Mushure mekunge bhuku racho rakwidziridzwa
Lesite brand Chirungu bhuku
Lesite Brand Chinese Chinyorwa
Iko kurongedza kwechitarisiko cheLesite Technology's edenga edzimba zvigadzirwa zvakagadziridzwa. Iyo itsva yekuisa (serial nhamba) ichavhurwa muna Kukadzi 1, 2021. Iyo iripo yekare yekurongedza ichatengeswa zvakare apo masheya achiripo. Izvo zvigadzirwa zvine zvitsva uye zvekare kurongedza zvakafanana. Vamiririri nevashambadzi pamatanho ese vanogona kuramba vachishandisa zvigadzirwa zvekare zvekuputira mune yavo yekutanga hesera. Kugadzirwa uye kugoverwa kwepakeji nyowani zvinoda zvishoma nezvishoma maitiro, saka haufanire kunetseka nezvazvo.
Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu rurefu-refu uye kuvimba neLesite Mune ramangwana, Lesite Technology ichagara iri musika-yakatarisana, vatengi-centric, ramba uchitsvaga zvigadzirwa, gadziridza masevhisi, uye shingairira kuvaka inoenderera uye inoremekedzwa yakanaka bhizinesi.
Post nguva: Kukadzi-25-2021